Warra seerattii dhihaachuu qaban, aangoo dabalaniifii ol muuduun kunhoo bu’aan isaafii deebiin - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWarra seerattii dhihaachuu qaban, aangoo dabalaniifii ol muuduun kunhoo bu’aan isaafii deebiin
Warra seerattii dhihaachuu qaban, aangoo dabalaniifii ol muuduun kunhoo bu’aan isaafii deebiin sabaa kana ta’a .
Kan hafanis guyyama eegatu malee namnii obbooleessa kiyya ajjeesee deebi’ee iddoo jijirattee isaa taa’uu namnii argee duubattii irraa deebi’u hin jiru.Akka tarkaanfiin kun dhaabbatuuf hayyoonni oromoo hundi yakkamtoota saaxiiluun seerattii akka dhihaatan halkaniif guyyaa iyyaa turan.Erga jijiruun isaan dhibee sabnii deebii laachuufii qabaatii TOLAA GADAA tif deebii gaarii laattameef. Maxxansii armaan gadii bara june 10 2018 n ture.
ARSII NAGEELLEE GAMMACHUU OFII IBSATAA JIRU….
Gantuu, saamtuufii saamsiistuun ganda hin qabdu.
Tolaa Gadaa yakka hojjate jira, ajjeechaa dabalate; umannii keenya afuura nagaan dhiisef ture. Yeroo carraan kee hamtu sii yaamtu gara abbidattii deemta, Tolaan naannoo lolaa lixa Oromiyaa deeme harka nama yakka isaa beeku kan WBO keessa jirurattii bu’e.
Dubbiin biraas keessa jiraachu mala garuu nama obooleessi isaa Tolaan ajjeefame ‘maalif ajjeefte’ jedhani gaaffachun bakka lolaa lixa Oromiyaa dhiisaatti mana murtittiillee rakkisaadha.
Nagaa busaa, Oromoon Oromoorattii duluun kufaati keenya saffiisa malee nu hin fayyadu. WBO jabeessaa, gaachana Oromiyaa godhaa. Duris kana jenne ammas kanuma jenna. ‘WBO balleessina’ jettani hin yaalinaa, WBOn waggaa 40 ture amma OPDOn balleessu hin dandeessu. WBOn hanga Oromiyaa fi umannii Oromoo jiruttii ni jiraata, qaama heera keenya ta’e seeraan socho’uu qaba.
Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaatti Hogganaa Komunikeeshiinii kan turan Obbo Tolaa Gadaa hojii Ummataaf gara lixa Oromiyaa deemanii kan turan qaama hidhadheen falmadha jedhun guyyaa har’aa ajjeeffaman.
Obboo Tolaa Gadaa dhalataa Godina Arsii Lixaati. Kana dura dhalataa Arsii Lixaa fi hoggansa mootummaa rakkoo nageenyaa uumamee tasgabeessuuf Lixa Oromiyaatti rammadamee ture bifa wal fakkaataan ajjeefamuun isaa ni yaadatama.
Gochii akkasii Kun itti yaadamee uummata Oromoo gosaa fi gandaan adda qoodanii diiguuf kan qindaawe ta’uun isaas hubatamuu qaba. Jarattiin Oromoo gandaan addaan qooddee ummata giddutti shakkii uumuuf hojjachaa jirtu tun hawaasa silaa keessaa bahen jira jettuufiis tahaa hin jirtu, guyyaa lama dura miseensa milishaa tokko bifa wal fakkaatuun ajjeessanii jiru.
Obbo Tolaa Gadaaf Rabbiin Jannata isaa, maatii fi firoottaniif immoo jajjabiina hawwinaaf.
OPDOn gadumaa deemtee deemtee akkuma baqxee badaa jirtu haasaan irratti fokkisaa jira. Waan isheen munaagdu ilaalaa. Dubbiin kun ishuma Abiy Ahmed “yoon Wallagga dhaqe na ajjeesu “ jedhe sana fakkaatti. Yoo ajjeefamtellee farra uummata Oromoo ta’uu keef ajjeesamta malee kan biraaf ta’uu hin danda’u.